Suuqgeena Suuqgeynta waxaa laga heli karaa Stitcher! | Martech Zone
Marty Thompson igu baray Stitcher, codsi fantastik ah oo isku daraya Podcasts kana dhigaya mid fudud oo laga helo mobilkaaga. Haddii aad tahay on a iPhone, Android, Blackberry, ama Palm - waxaad kala soo bixi kartaa Stitcher oo hadda dhegeyso kuweenna Suuqgeynta Suuqgeynta la Edge-ka Webka Raadiyaha.
Dhageystayaasha bandhiga si isdaba joog ah ayey u korayeen waxaana ku raaxeysaneynaa martida waaweyn - oo ay ku jiraan Lisa Sabin-Wilson, Eric Tobias, Chris Brogan, Debbie Weil, Jason Falls, Scott Stratten, Nicholas Carr… Iyo qaar kaloo badan. Bandhigyada ayaa la soo dejiyey in ka badan 5,000 jeer waxaana sidoo kale laga heli karaa iTunes. Toddobaad kasta, waad ka gali kartaa qolka sheekaysiga ee ay dhagaystayaashu ku sheekaystaan, ku dar qiimo bandhigga oo waydii su'aalo.
Hadaad raacayso Suuq-geynta Tech Tech barta Facebook, waxaad ka heli doontaa ogeysiisyo markii bandhiggu bilaabmayo. Waxaan rajeynayaa inaad toddobaad walba nagala soo qayb geli karto, waxay ahayd fursad weyn oo wax looga barto hoggaamiyeyaasha Suuqgeynta iyo Teknolojiyada. Haddii aad xiiseyneyso inaad ka mid noqoto riwaayadda, waxaa nala ballansan yahay dhowr bilood laakiin noo soo sheeg barta. Haddii aad ku sugan tahay Indianapolis, xitaa waad iska dhici kartaa oo waxaad ka mid noqon kartaa bandhigga xafiiskayaga.
Waad ku mahadsantahay taageerada - iyo ku abuuri koonto bilaash ah Stitcher si aan u dhageysano barnaamijkeena ugu dambeeyay! Waxay hadda leeyihiin tartan meesha aad ku guuleysan karto a Sonos S5 + ZoneBridge (Qiimaha $ 500).
Tags: Suuqgeynta Suuqgeyntatoliyeraadiyaha tolida
Miyay Tahay Waxyaabaha Astaamaha Google?
WordPress Mobile oo leh WPtouch Pro
Nov 12, 2011 saacadu markay tahay 4:28 PM
Ku cusbooneysii boostada wareysi fiidiyow oo weyn oo Jeff ah oo ka socda @geekazine at #bwela. Hubso inaad dhageysatid barnaamijkeena raadiyaha - had iyo jeer waa wadahadal xariif ah oo lala yeesho martida cajiibka ah.